Ụgbọ ala ihe nkiri mkpuchi ụgbọ ala Tpu na-acha odo odo nke KPAL PPF-ụlọ ọrụ akụkọ-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Ụgbọ ala ihe nkiri mkpuchi ụgbọ ala Tpu na-acha odo odo nke KPAL PPF
Ihe nkiri mkpuchi ụgbọ ala Tpu na-acha odo odo nke KPAL PPF
Ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye ihe nkiri na ụgbọ ala maka nzube nke ichebe ụgbọ ala na imeziwanye ọdịdị ha. N'ihi ya, ihe nkiri na-acha odo odo na-ebelata ọdịdị nke ụgbọ ala ahụ nke ukwuu. Gịnị kpatara nke a? Ọ nwere ihe ọ bụla film nke na-adịghị agbanwe edo edo?
N'ụzọ dị otú ahụ, gini PPF? It bụ ụdị ihe nkiri polyurethane, nke bụ naanị ihe nkiri nchebe transperent maka agba ụgbọ ala, nke a na-akpọkwa ụgbọ ala PPF. Ngwaahịa ahụ nwere ihe mgbochi UV polymer, nke nwere njirimara nke ịdị elu siri ike, nguzogide abrasion, mgbochi odo odo, ma nwee ike kewapụ elu ụgbọ ala ahụ site na ikuku mgbe echichi, mmiri ozuzo mgbochi acid, mgbochi oxidation, mgbochi-scratch na. ya mere na. Ya mere, gịnị kpatara yellowing-eguzogide film agbaala edo edo ugbua? Nke a metụtara ihe onwunwe nke film. PPF Nke pụtara na mbụ bụ nke PVC, nke bụ polyvinyl chloride. Ọ dị ọnụ ala, na-eguzogide mmetụta, ma sie ike karị, mana mwepu ya bụ na ọ na-adịkarị mfe ịcha edo edo. Ya mere, ndị ọdịdị nke Enwere ike ịkpata odo site na adịghị mma.
Ugbu a ka mma PPF is n'ozuzu mere nke TPU ihe. N'ikwu okwu n'otu n'otu, ọnụahịa nke ihe TPU ga-adị elu. Mana "ikike azụmahịa" ya dị mma,na ike ya dị iche iche ruru ọkwa ọhụrụ. N'otu oge ahụ, enwere ike ịmegharị ya, ọ bụ ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi, na arụmọrụ ya na-emegide edo edo ka mma. Ọmụmaatụ, Ngwaahịa usoro KPAL nwere mmetụta ndị a. Ebe ọ bụ na ị na-etinye ihe nkiri nchebe agba n'ụgbọ ala gị, ị na-atụ anya na ọdịdị ụgbọ ala gị ga-adị n'ịntanetị na ọ gaghị emebi ngwa ngwa.
KPAL Ihe nkiri nchebe agba na-anabata usoro nkedo rọba polymer TPU, ma na-emepụta mkpuchi ihu igwe dị iche iche dịka ihu igwe na gburugburu obodo dị iche iche si dị. Ọ nwere nguzogide mmetụta siri ike, mgbochi nkwụsị na arụ ọrụ mgbochi; ịrụ ọrụ nrụzi ọkọchị kwụsiri ike, mgbaka mmiri siri ike, nguzogide corrosion kacha mma, nguzogide unyi, oke okpomọkụ na-eguzogide, yana ezigbo mgbochi odo odo.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe nkiri nchebe agba, biko pịa ịbanye na ndụmọdụ gọọmentị:www.kpalautomotive.com